FALANQEYNTA JIMCAHA: Yuu ku wajahan yahay Amarka M/weyne Farmaajo ee Iibka dhulka Muqdisho, Yaase ka dambeeyey in la soo saaro, Xaaladda Thaabit waa sidee? – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAFALANQEYNTA JIMCAHA: Yuu ku wajahan yahay Amarka M/weyne Farmaajo ee Iibka dhulka Muqdisho, Yaase ka dambeeyey in la soo saaro, Xaaladda Thaabit waa sidee?
FALANQEYNTA JIMCAHA: Yuu ku wajahan yahay Amarka M/weyne Farmaajo ee Iibka dhulka Muqdisho, Yaase ka dambeeyey in la soo saaro, Xaaladda Thaabit waa sidee?
Si weyn ayaa loola yaabay amar deg deg ah oo ka soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo socdaal uga maqan Xaafiiska Villa Soomaaliya, kuna marayo gobalada dhexe ee dalka oo ay u tahay socdaalkisii ugu horeeyey ee u ku tago.
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu si toos ah ugu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay xaafiiskiisa qoraal u qornaa siddan “Iyada oo la ilaalinayo hantida qaranka ee dhul, cir iyo bad waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in wixii dhul ah ee la iibiyay ama la hibeeyay ama la kireeyay keddib 8-dii Febraayo, 2017 uusan haysan ogolaansho sharci ah. Haddii uu jiro muwaadiniin iibsaday ama kireystay dhul danta guud, waxaan u sheegayaa in iibsigaas uu yahay mid sharci darro ah.” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedkan.
Saaxiibadii Madaxweyne Farmaajo ayay muuqataa in ay kala jabeen oo qoloba ay jiho qaaday, qolo taageerada Farmaajo haysata iyo qolo laga awood badiyey oo u leexday dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Maqaamka caasumada Muqdisho.
Gudoomiyaha gobalka Banaadir Thaabit Maxamed Cabdi oo ka soo jeeda Muqdisho, wuxuu hadda la kulmayaa weerar adag oo uga yimid Villa Soomaaliya, taas oo ka dambeysay markii uu isku dayay dhismaha dawlad gobaleed gaar ah oo ay yeelato Muqdisho.
Talaabadaas waa mid aan farxad galin Villa Soomaaliya, waxaana si adag uga hor yimid dawlad gobaleedyada qaarkood, Siyaasiin kusugan Muqdisho iyo Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin u arka arrin dhib ku ah socodsiinta howlaha uu ka hayo Madaxtooyada.
Xasan Cali Kheyre wuxuu si toos ah u joojiyey shir loogu magac-daray shirka Aaya katalinta gobalka Banaadir, kaas oo maalintii uu qabsoomi lahaa si toos ah uga hor yimid Xaafiiska Madaxweynaha oo ku amray Kheyre in uu awoodisa u adeegsado joojintiisa.
Ka sokow talaabada Kheyre ee amarka Agaasimaha guud Madaxtooyada Soomaaliya uga yimid, haddana Thaabit Maxamed Cabdi ayaa diiday un uu dhawaan ka qeybgalo soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya oo Dhuusa-Mareeb tagayey iyo xaflad loo dhigayba.
Thaabit oo isku diyaarinaya masraxa Siyaasadeed ayaa wajahaya weerarkii ugu adkaa oo uga imaanaya Madaxtooyada dalka, waana markii 2aad oo uu Madaxtooyada saameyn ku yeesho balse si fudud looga saarayo, iyadoo ay wali is hayaan raggii waqtigaas dagaalku dhexmaray.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah ragga sida aadka ah uga faa’iideysta fursadaha dahabiga ah ee siyaasadeed, ayaa ku sifeeyey dhaqanka cusub ee soo baxay mid ay cadahay cidda lagu soo duulan yahay.
”Way cadahay cida lagu beegsanayo Qoraalkaan siyaasadeysan ee xafiiska Madaxweynaha laga soo saaray isagoo safar ku jira. Waa isi sifayn siyaasadeed oo ka dhex socota rag ku kala aragti duwan Maqaamka Magaalada Muqdisho iyo falkii dhacay 17kii Dec. Waa hadal Xaq ah, laakiin Baadil loola jeedo sababtoo ah ku xad gududbka hantida Qaranka kuma koobna Muqdisho oo keli ah. Cidna daah kama saarna in aan hanti badbaadin loo socon ee lagu uur kacsanayo oo keli ah.” ayuu yiri Mr, Warsame
Mr, Warsame wuxuu leeyahay fikradaha kahortagida maqaamka Muqdisho waa mid horseedi karta talaabooyin aan la mahdin doonin oo ay la kulanto Madaxtooyada Soomaaliya.
”Waxaan ka digaynaa natiijatada ka dhalata ficilada gurracan iyo talaabooyinka shirqoolka ah ee qoraalkan daba yaala oo ay soo maleegeen dadka marin habaabinaya Madaxweynaha, kuwaasoo doonayo in ay si ula kac ah iskaga horkeenaaan isaga iyo beelaha qaarkood” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Cabdishakuur Cabdiraxmaan oo dhawaan gurigiisa la weeraray laguna dilay 5 kamid ah ilaaladiisa.
Arrimaha lays leeyahay Thaabit waa uu ku waayay taageerida Shaqsiyaadka hagaya Madaxweynaha Soomaaliya, waxaa kamid ah la kulanka mucaaradka dawladda iyo doonistiisa ku aadan in Amniga Gobalka Banaadir isagga lagu wareejiyo oo uu cadaawad xoog badan ku muteystay.
Marka dib loo eego loolanka adag ee ka dhex bilowday Villa Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xili uu dhawaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka soo laabtay Puntland, lugtiisii ugu dambeysa ee safarkana ku maraya gobalada dhexe ee Galmudug ay maamusho.
Lama garan karro halka ay ku kala hari doonin ragga ku loolamaya Villa Soomaaliya, waxaase shaki saarneyn in Gudoomiyaha gobalka Banaadir hadda looga badiyey loolanka Awoodeed ee u dhawaanshaha Madaxweynaha Soomaaliya.
54,096 total views, 1,983 views today
54,096 total views, 1,983 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
54,165 total views, 1,982 views today
54,165 total views, 1,982 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
54,177 total views, 1,983 views today
54,177 total views, 1,983 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
54,196 total views, 1,981 views today
54,196 total views, 1,981 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
54,238 total views, 1,985 views today
54,238 total views, 1,985 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]